‘हरि’, ‘अमेरिका बोइज’ र ‘बेबी आइ लभ यू’ मा कुन चल्ला ? « Ramailo छ
‘हरि’, ‘अमेरिका बोइज’ र ‘बेबी आइ लभ यू’ मा कुन चल्ला ?
प्रकाशित मिति : May 31, 2018
समय : 8:55 pm
यो शुक्रबार तीन नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । बिपिन कार्की स्टारर ‘हरी’ मल्टिप्लेक्स केन्द्रित फिल्म हो भने फिल्म ‘अमेरिका बोइज’ र ‘बेबी आइ लभ यू’ ले मल्टिप्लेक्स तथा एकल पर्दा बाँडफाँड गर्नेछन् ।
सफल केसी र प्रतिक गुरुंगले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको फिल्म हो ‘हरि’ । जसमा अभिनेता बिपिन कार्की शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । फिल्ममा उनका विभिन्न भूमिका छन् । बिपिनसँगै हरीमा सुनिता श्रेष्ठ ठाकुर, कमलमणी नेपाल, थिन्ले ल्होमो, लक्ष्मी वर्देवा, सुनिशा बजगाँई लगायतको अभिनय छ । कामेश्वर, अभय र आशिषसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
यस्तै फिल्म ‘अमेरिका बोइज’ अमेरिका जान खोज्ने नेपाली युवाको कथा हो । कमेडी रुपमा प्रस्तुत गरिएको फिल्ममा अर्पण थापा, सुनिल थापा, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरसिया, अभय बराल, आशिष प्रसाईं लगायतको मुख्य भूमिका छन् । प्रवेश पौडेल निर्देशित फिल्मलाई प्रकाश भूजेल र ईन्द्र प्रसाद खरेल मिलेर बनाएका हुन् । सन्तोष र पूजासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
युवा पुस्ताको प्रेम कथालाई बुनेर बनाइएको फिल्म हो ‘बेबी आइ लभ यू’ । फिल्ममा दुई नव कलाकार सन्तोष खड्गी र पूजा तिवारी मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । जनक पाण्डेको निर्देशन रहेको फिल्मलाई शिव न्यौपाने र सृजना परियार मिलेर बनाएका हुन् । फिल्ममा सन्तोष र पूजासँगै सरोज खनाल, निर्मल शर्मा, राजु कमेडी लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।